प्रमुख आयुक्त यादवले भने, 'निर्वाचनका बारेमा आशंका नगर्नुस्'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
प्रकाशित : आश्विन २१, २०७४ १५:३३
आश्विन २१, २०७४ भवसागर घिमिरे
काठमाडौं — ‘मिटर’को नाम सुनेपछि ट्याक्सी चालकले आफ्नो मुन्टोको घण्टा सुई तीन बजेबाट सोझै ९ बजे तिर फर्काउाछन् । नाक हल्का खुम्च्याएर निधारमा चार लेनको बाटो बनाउाछन । यस्तो बेलामा हामीले आफ्नो कन्चटको नसा पिलिक्क–पिलिक्क टन्केको महसुस गर्न पाउाछौं ।
सामान्यतया छ घण्टा लाग्छ । गत बिहिबार १२ घण्टाको बस यात्रामा बल्लतल्ल काठमाडौं आइपुगियो पोखराबाट । एसी सुविधासहितको टुरिष्ट बस गोल्डेन ट्राभल्सले एसीको चिसो त पूरा यात्रामा जम्मा आधा घण्टा मात्र चखायो त्यो पनि सबैले झपार्न थालेपछि मात्र । वाइफाइ त कहाा पाउानु । यसै पनि धेरै बसमा वाइफाइ लेखिएको पढ्न पाइन्छ, चलाउान पाइादैन ।
एकै सिट भिन्न यात्रुहरूको नाममा बुकिङ गर्देकाले अर्को तनाव भयो । आधाघण्टा भन्दा बढी दोबाटो मै बस रोकियो । केही विदेशी पर्यटकले आफू बसिरहेको सिट गुमाए र अन्त सर्नुपर्‍यो । यस्तो बेला हरियो प्लेट लगाउाने बसलाई नै लाज नलागेपछि के गर्नु ?
अझ बसको ढोका बिग्रेको रैछ पुरै दाम्लो लगाएर बााध्न र खोल्न पर्ने । बस हिँडिरहँदा पनि धेरै पटक डोरी फुस्केर ढोका अटोमेटिक खुल्थ्यो । यात्राभरी ढोका झर्ला कि झै गरी बजेको कर्कश संगीतले पनि पार्नु पार्‍यो । सानी छोरीको हैरानी हेर्दै, दोब्बर समय लगाएर, कलंकी झरेको छैन ट्याक्सीवालाको मनोमानी सुरु भयो ।
सामान्यतया ३ सय रुपैयाँमा कलंकीबाट नयाँ बानेश्वर आइपुगिन्छ मिटरमै । एक त मिटर लगाउँने कुरो गर्दा कानै नसुने झै गर्छन् । अर्को कोट्याइ कोट्याइ सोध्दा ५ सय घटी कसैले भन्या हैनन् । सोच्छु, यो सहरमा ट्याक्सी चढ्दा जाने ठाउँका बारेमा मात्र कुरा हुनै, पैसाको बारेमा कुरै गर्न नपर्ने कहिले होला ? पैसा त खास ट्याक्सीको मिटरले बोल्न पर्ने हो तर यहाँ त्यो भन्दा पहिला चालकको मुखको मिटर चल्न सुरु गर्छ । अझ मिटर जाउँ भन्ने बित्तिकै केहीले भने मीठो कथा बुन्दा रैछन्, ‘जान्थे हेर्नु न अर्को मान्छे कुरिराछु ।’
लामो यात्राले प्रेसर परेको टाउकोमाथि ट्याक्सीवालाको मनोमानीले गर्दा कुकरको झै सिठ्ठी बज्न सुरु गर्‍यो । सहनुको पनि हद हुन्छ । कलंकी मकालु पेट्रोल पम्पअघिको धुलाम्य सडकमा झोलाको चाङ अनि श्रीमती र छोरीलाई छाडेर म सरासर कलंकी चोक जाँदै गर्दा ट्राफिकलाई भेटेँ । ‘दिक्क बनाएँ, कोही मिटरमै जान मान्दैनन, पैसा पनि कम भन्दैनन,’ मेरो कुराले भन्दा पहिला ट्राफिक प्रहरीलाई जामले तनाव दिइसकेको रैछ । उनी पनि जंगिँदै भने, ‘त्यसको आज दिन बिग्रेछ कुन हो देखाउँनुस् त ।’
यति धेरैसँग रिक्वेस्ट गरेको थिएँ । कोही चिनिएनन् । कोही तितरबितर भैसकेको थिए । अन्तिमको एक ट्याक्सी वालासँग भने अल्लि विवादै भाथ्यो ।
‘नयाँ बानेश्वर जानुहुन्छ ?’
‘कति दिनुहुन्छ ?’
‘सामान छ ?’ उनीले टार्ने हिसाबले भने ।
‘दशैंमा घरबाट आएको मान्छेको झोला हुँदैन ?’ मैले आफूसँग सामान्य झोला भएको खुलाएँ ।
‘मिटरमा मिल्दैन, मिलार दिनुस्’
‘के मिलाउँने ? मिटरमा जानै नमिल्ने भए ३ सय उठ्ने हो त्यही दिन्छु’ मैले मुख फोरे ।
हुन त यसरी सोझै रकम भन्न नहुने हो । तर हाम्रो सिस्टम यस्तो बसेको छ कि ‘मिटर’ भनेर अड्डी लिइरहनसकिन्न भन्ने तितो सत्य मैले स्विकार्नु पथ्र्यो । यहाँ त मैले ३ सय भनेपछि ती चालक बोल्न छाडे । मुन्टो अर्को तर्फ फर्काएर बसे । मैले जाने हैन भनेर सोधेँ । उनी केही बोलेनन् । टाउको मात्र हल्लाए । उनको यो पाराले दिनभरीको भडाँस मेरो मुखमा आइसकेको थियो ।
मैले अल्लि नजिक गएर चर्को स्वरमा भनेँ, ‘क्या हो ? बोल्न पनि आउँदैन ?कति लिनुहुन्छ ?’
‘पाँच सय घटी हुँदैन ।’
यि पनि अघिका ट्याक्सीवालाकै कित्तामा गए । न ढुंगा हाल्नु न ट्याक्सी धकेल्नु । के गरुँ र कसो गरुँ भन्दै भुटभुटीँदा हामीजस्ता यात्रु यतिखेर आफू आफैलाई निरिह महसुस गर्दा रहेछौं । त्यसमाथि लामो यात्राबाट काठमाडौं झरेकालाई त झन्, रिसको पारोले थर्मोमिटर फुटाल्छ ।
‘५ सय घटी जान्न, मिटरमा त मिल्दैन’ भन्दै उनले हाक्कै मुख फोरेका थिए । मैले ट्राफिकलाई सोझै उसैतर्फ देखाइदिएँ । प्रहरी सो ट्याक्सीसम्म पुग्नुअघि नै उनले अर्कैसँग बार्गेनिङ गर्न भ्याइसकेका रैछन । कुलेश्वर जान खोजेका एक दाई रिसाउँदै थिए, ‘हद हुन्छ नी यार के भन्या त्यस्तो ?’
त्यसै बेलामा प्रहरी सरासर गए अनि ड्राइभर सिटको ढोका खोलेर कागजपत्र माग्न थाले । उनले पनि ‘के भो र ?’ भन्दै चोखिन खोजे ।
‘मिटरमा जान नमान्ने ?’ प्रहरी कड्किए, ‘खै कागजपत्र निकाल्नुस् ।’
‘को सँग मानिन?’ उनी हल्का रुपमा प्रस्तुत भए । प्रहरीको अघि सरासर गएर म उभिएँ।
‘उहाँले बोरा छ भनेर लैजान मिल्दैन भनेको, मिटरमा जान्छु त भनेकै छु,’ हत्तनपत्त चालकको बोली फेरियो ।
मैले यस्तो कुरै भएको छैन भनेर अड्डी कसेँ । यात्रु र अन्य केही ड्राइभर जम्मा भए । यात्रुहरूले मेरो सपोर्ट लिए । ट्याक्सी चालक एकादुईले उनको सपोर्टमा मुख खोले । केही बेर बाझाबाझ भयो ।
आखिरमा झुठ बोलेका उनी नै निहुरिए । ट्राफिकले भनेपछि मैले ट्याक्सीको ढोका खोलेर सामान फटाफट हालेँ र हामी छोरीसहित ट्याक्सी चढ्यौं । ति ड्राइभरले मिटर अन गरे । ‘बाटोमा केही लफडा झिके भने तुरुन्त १०३ मा कल गर्नुहोला,’ ट्राफिकको कुराले धेरै ढाडस दियो । मिटरमै भनेकै रकमबासस्थानसम्म आइयो । सोझै ट्राफिक प्रहरी वा १०३ मा कम्प्लेन गरेको यो पहिलो पटक भने थिएन ।
यसअघि मैले धेरै ट्याक्सी चालकसँग यात्रा गरेको छु जसलाई मिटरमा जाउँ भनेपछि सोझै हुन्छ भनिहालेका छन् । धेरै त्यस्ता पनि भेटेको छु जसले ‘मिटर’को नाम सुनेपछि आफ्नो मुन्टोको घण्टा सुई तीन बजेबाट सोझै ९ बजे तिर फर्काउँछन् । नाक हल्का खुम्च्याएर निधारमा चार लेनको बाटो बनाउँछन । यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो कन्चटको नसा पिलिक्क पिलिक्क टन्केको महसुस गर्न पाउँछौं ।
प्राय अरु बेलाको ट्याक्सी यात्रा भन्दा बिल्कुलै फरक ट्याक्सी चालकसँग रमाइलो गफगाफ नगरी ‘तै चुप मै चुप’ को अवस्थामा सरासर डेरामा आइयो । झर्ने बेलामा ट्याक्सीको फोटो पनि खिच्न भ्याएँ । खासमा मलाई १२ घण्टाको पोखरा—काठमाडौं यात्रा भन्दा कलंकीका लफडाले धेरै थकायो । सम्झदा पनि मन खिन्न भएर आउँछ, हामीले कस्तो सहर बनायौं, मिटरवाला ट्याक्सीमा मिटर चलाएर यात्रा गर्न पाउँदा युद्ध जितेको अनुभव हुने ।
twitter : @bhabasagar